Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Maxaynu raacayso tareen? safarka tareenka waxaa lagu nasto, wax ku ool ah iyo dalabyo arrin bulsho oo hababka kale ee gaadiidka fudud ma u dhigma karaa. Si kastaba ha ahaatee, safraya naafada ah waxay noqon kartaa dhib in qaar ka mid ah. Tani macnaheedu maahan inaadan ku raaxeysan karin baashaalka, in kastoo. Maqaalkani waxa uu…